राम्रो पढ्ने डाक्टर, इन्जिनियर बन्छ, मध्यम खालका लोकसेवा पास गरेर प्रशासक बन्छन्, निम्न खालका न्यायाधीश बन्छन् र फेल हुने, नपढ्नेहरु नेता बनेर थर्काएर देश चलाउँछन् । यस्तै यस्तै कमेन्ट आइरहेका छन् सामाजिक सञ्जालहरुमा । नेपालमा यस्तै परिस्थितिजन्य घटनाहरु दोहोरिरहेका छन् ।
संसदको सुनवाई समितिले दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन नसकिने फैसला गर्‍यो । उनको जीवनभर जे कमाए त्यसमा कालो पोतियो, जे गुमाए, उनको मनमा खत र खोप रह्यो । उनी अस्वीकृत भएपछि प्रश्न उठेको छ– हाँडिगाउँको ३६ रोपनी ६ आना सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न आदेश दिने यिनै जोशी थिए । यिनलाई साथ दिने अर्का न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई चाहिं के हुने नि ? न्याय दिने सर्वोच्च अदालत, संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च अदालतमा एउटै अपराधमा एकलाई सूली र अर्कालाई चौतारी त नहोला कि ? अदालतकै आन्द्राभुँडी हेर्ने संसदीय सुनवाई समितिले यता पनि हेर्ला कि नहेर्ला ? फेरि, यसरी भ्रष्टाचार हेर्ने संसदीय सुनवाई समितिका सदस्यहरु चाहिं दूधले नुहाएका छन् कि यो निर्णयमा इसाईहरुको पनि हात छ ?
तत्कालीन सरकारमा कानुनमन्त्री थिए नरहरि आचार्य । उनी नै हुन्, सादा तर यति गम्भीर निर्णय गर्ने मन्त्री। उनले प्रकाश वस्तीजस्ता न्यायाधीशलाई अघि बढ्न रोकेर कांग्रेसी आवहवामा हुर्केका गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीलाई अघि बढाउने वातावरण सिर्जना गरे । गलत निर्णयको गलत परिणाम आउने रहेछ । अहिले गोपालपछि दीपकको पनि के हालत भयो ?
यी कारणले गर्दा यतिबेला अदालतको बेञ्चलाई लाइभ गर्ने माँग उठेको छ । यो माँठ उठ्नुमा अदालतभित्र राजनीति घुस्नु, आइएनजीओ पस्नु र व्यापक आर्थिक चलखेल हुनुले पनि हो । अदालती बन्दोबस्त बिग्रनु, अदालत धनीको बन्दकी हुनु र गरीवका लागि न्याय साह्रै तीतो तरिका बन्नुले पनि अदालती बहस र फैसला लाइभ होस् भन्ने माँग जनस्तरबाटै उठ्न थालेको हो ।
अव बन्ने प्रधानन्यायाधीश स्वच्छ छवि भएको, न्यायप्रेमी बनोस् । न्याय बिचौलियाको खेल्ने साधन नबनोस् । जो कसैले पनि फैसला भएपछि न्यायको अनुभूति गर्न पाओस् । न्याय छिटो छरितो पनि होस् । पराजुली र दीपक जोशी काण्डपछि न्यायालयले गुमेको साख आर्जन गर्ने वातावरण बन्ला ?